Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ashley Barnes Akụkọ nwata na gbakwunyere Ezigbo akụkọ banyere Biography
Emelitere ikpeazụ April 15, 2020
LB na-enye akụkọ zuru oke nke Football Genius na aha ya "Barney“. Anyị Ashley Barnes Akụkọ nwata na gbakwunye akụkọ Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ashley Barnes Akụkọ Nwata - Nyocha rue ụbọchị. Ebe E Si Nweta ka BBC na DailyMail
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya mbụ, nzụlite ezinụlọ, ndụ ọrụ ya mbụ, ụzọ maka akụkọ ama ama, ibilite na ama ama, mmekọrịta, ndụ onwe ya, ụdị ndụ ya, ndụ ezinaụlọ ya na akụkọ a na-akọghị.
Ee, onye ọ bụla na-ahụ Barnes dị ka onye ọkpụkpọ ahụ nke mepụtara aha ọjọọ nke na-eme ka ndị iro na-eme ihe ma nwee nnukwu ihe mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Ashley Barnes nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Onye ọ bụla maara ya dị ka Ashley Barnes Kachasị mma aha ya bụ Ashley Luke Barnes. A mụrụ Barnes n’ụbọchị 30 nke October 1989 n’obodo Bath, United Kingdom. A mụrụ ya na nne na nna Bekee nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ na-abụghị nke Britain. Barnes nwere ezinụlọ sitere na Austria. Ị maara?… Nne nne ya sitere na Klagenfurt, obodo dị na ndịda Austria.
Ashley Barnes toro na Bath, nnukwu obodo dị na England mara amara maka ebe ịsa ahụ Rome ya na ọmarịcha ihe ochie ndị Rome. Nke a nwere ike ịkọwa ihe kpatara nne nne Ashley Barnes ji hapụ obodo ya nke Austria ka ha biri n'obodo Bekee.
Ashley Barnes toro site na Bath- A City na England. Ebe e si nweta LuxuryTraveladvisor na WordAtlas
Akụkọ banyere Ashley Barnes n'oge ọ dị obere na-egosi na ọ zụlitere n'ezinụlọ ụlọ klas nke etiti. O nweghị mmasị na nlegharị anya mgbe ochie, naanị football. Ndị nne na nna Ashley Barnes dị ka ọtụtụ ezinụlọ na Bat nwere ike nye nwa ha nwoke akwukwo ohuru eji egwuri egwu.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Inwe nne na nna nwere mmasị na football, ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị maka Barnes inwe ịhụnanya na egwuregwu mara mma. Nke a gụnyere ya na-arọ nrọ nke ịghọ onye egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu.
Ashley Barnes keere òkè na bọl bịara n'oge agụmakwụkwọ mbụ ya. Laa azụ n'oge ahụ, ndị mụrụ ya debara aha ya na ithlọ Akwụkwọ Writhlington nke dị n'ime obodo Dunkerton nso Bath, England. N’ụlọ akwụkwọ, Ashley nwere mmasị n’ịgba bọl asọmpi.
Ashley Barnes Mmụta na Ọrụ Buildup. Ebe E Si Nweta nye GoogleMaps
Ọ pụọ n'ụlọ akwụkwọ, Barnes gara n'ihu jiri obi ike na-egwu bọl bọlbụ, na-etolite bụ omume nke imebi akara ya na iji bọl bọl na-eme ihe na-acha anụnụ anụnụ. O mere nke a n'anya ndi enyi ya na ndi ezinulo ya.
Ashley Barnes gbadoro ụkwụ dị ka nwatakịrị na mkpebi ya ịbụ ọkachamara n'egwuregwu football abụghị echiche efu. N'itinye onwe ya n'ọrụ, o kpebiri ịga Chelwood Drive nke dị na Somerset County iji gaa ule bọọlụ ya na Bat Arsenal Juniors.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Ndụ Ndụ Mmalite
Mgbe ọ ka bụ nwata, Barnes hụrụ onwe ya ka ọ na-agafe Bat Arsenal Juniors ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ma debanye aha na klọb ahụ nke ọma. Bat Arsenal Juniors Football, agbanyeghị na ọ jikọghị na Gunners bụ klọb bọọlụ nke nwere otu maka ụmụaka dị n'afọ niile.
Mgbe ọ nọ na klọb Bat Arsenal, Ashley Barnes zutere ndị otu egwuregwu ibe ya Scott Sinclair bụ onye ghọrọ ọkachamara. Ọnụ, ụmụ nwoke abụọ ahụ nwere oge dị mma tupu Sinclair hapụrụ ịbanye na Bristol Rovers mgbe ọ dị afọ itoolu.
Ashley Barnes Early Life ya na Bat Arsenal. Ekele diri IG
Na mbido, ihe Ashley niile chọrọ bụ iru elu nke ịgba bọọlụ Bekee. N'okwu ya:
“Kwa ụbọchị m tetara, m na-ata ya ụtarị. Nrọ nke ibu pro bu ihe itunanya, a na eche kwa ubochi obula mgbe m di na nwata. ”
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Akpanwu akwukwo akuko
Ashley Barnes bidoro ọrụ ya dị ka onye na - eme egwuregwu Paulton Rovers, bụ ọgbakọ dị na English Southern League. Na-eto eto Barnes nke e sere n'okpuru ebe a bụ otu n'ime ndị kacha asọmpi na Njikọ Njikọ English.
Ashley Barnes Oge Ndụ ya na Senior Football. Ekele si BBC na Dave Rowntree
Ashley Barnes bụ onye ama ama dị elu n'oge mmalite ọrụ ya. Ọ malitere inweta ezigbo onyinye sitere na klọb buru ibu na England nke otu egwuregwu. Nke a gosiri akara njem ya site na ndị otu Njikọ ruo na nke elu nke Njikọ Njikọ nke Bekee- Premier League.
Ashley Barnes mụtara ụzọ siri ike ya na ego mgbazinye ego na Oxford United, Salisbury City, Eastbourne Borough, Torquay United na Brighton Hove Albion. Edebere onye ọ bụla n’ime ụzọ mgbazinye ego a ka ọ nwere oge pere mpe iji gosi ndị na-ahụ maka ya. Ị maara?… Ọ kachasị nke ọma ma mebie akụkụ dị ala nke sistemụ English site na Loan spells ruo ihe kachasị elu na aha nke ịghọ onye ọkpụkpọ mbụ.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Na-ewu ewu Akụkọ
Ashley Barnes nwetara ihe ọchọrọ, nrọ ahụ ka ọ bụrụ onye ọkpọ ọkpọ ga - ahọrọ bọl nke ga - enye ya nkwekọrịta na - adịgide adịgide. Ihe niile mere n'ezie na oge 2011 – 12 mgbe o nyeere Brighton aka ịlaghachi na Njikọ Championship dị ka onye mgbaru ọsọ mgbaru ọsọ na-enwe ihe mgbaru ọsọ 14 na asọmpi niile.
Na 10 Jenụwarị 2014, arụmọrụ Barnes hụrụ ya ka Burnley na-eburu ya ụgwọ maka ego anaghị egosipụta. Naanị afọ anọ, n'ụzọ ziri ezi na 3rd nke March 2018, o dere onwe ya n'ime akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke klọb site na mgbe ọ ghọrọ onye na-eduga klọb na EPL ebe ọ bụ na e guzobere ya na 1992. Dị ka n'oge edere, Barnes enwetawo aha dị ukwuu maka ịmebigharị ma ndị na-emegide ya ma ndị na-emegide ya n'ihe ọ chọrọ.
Ashley Barnes na-eme ememe otu n'ime ebumnuche ya PremierLeague
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị abụ n'ọkwa nke Sergio Aguero, mana maka ndị egwu Burney, tỌ ga na-echeta nọmba dị oke ọnụ ahịa 10 ga-echeta. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Ndụ mmekọrịta
N'azụ onyeisiala Bekee na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma aha ya bụ Zan Barnes onye amabeghị ihe banyere ya. Abụọ Barnes na Zan lụrụ ma nọrọ ogologo oge. Ha niile, ha nwere nwa nwoke aha ya bu Flynn onye amuru na 2011.
Zute Ashley Barnes Child- Flynn Barnes
Flynn nwere ike ịnọ ihe dị ka afọ 2 n'oge ọ na-eyi uwe elu ahụ Brighton na 8 dị ka n'oge ede edemede a.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Ndụ nke Onye
Tomara ndụ Ashley Barnes ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ. Gburugburu O mere ka anyị ghọta na Barnes bụ onye dị ala n'ụwa na-emere ndị otu egwuregwu ibe ya ebere. Ash-Cabs, dịka a na-akpọ ya aha bụ onye na-ebu ndị mmadụ na onye ndu nwere obi ụtọ n'inyere ndị otu egwuregwu ya aka na njem.
Ọ bụghị ahụkarị Premier League ka ịhụ otu egwuregwu bọọlụ ka Barnes na-arụ ọrụ cab. Agbanyeghị, Barnes na-agbadakarị n'oche ụgbọala nke Burnley na ebe ọzụzụ klọb ahụ ya na ụfọdụ ndị otu egwuregwu bọọlụ nọ na bọs ya. Nke a bụ akaụntụ nke akụkọ site na onye na - akwado ya;
Mgbe ọnụ ụzọ ndị njem na-amịfe gafere, ahụrụ m ndị ọgba bọọlụ asaa apụta, otu n'otu. Mgbe ahụ ọnụ ụzọ onye ọkwọ ụgbọala mepere ma pụọ ​​Ashley Barnes, onye na-ebute ụzọ na-achọ mgbaru ọsọ na ọkwọ ụgbọala ahọpụtara.
Na mbu, Barnes gbara otu ndi maara ama, ma emesiri kwalite ya na obere ulo dika ahuru n’okpuru. O mere nke ahụ n'ihi ndị otu egwuregwu.
Ashley Barnes LifeStyle Eziokwu. Ebe E Si Nweta nye AutoEvolution
Nke a bụ ihe mere eji akpọkwa onye ndu mmụọ Burnley FC aha "Ash-Cabs”. Ndị egwuregwu bọọlụ Burnley na-ezukọ n’ebe a na-eburu nri na Cheshire ọtụtụ ụtụtụ tupu onyeisi ụgbọ ha na No10 abịarute ịhọrọ ha.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Ndụ Ezinụlọ
Barnes nwere ndị ezinaụlọ bi na Britain na Austria. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-atụ anya na ezinụlọ ya nso ga-abụ ndị niile na-eme egwuregwu Burnley, ihe dị iche bụ nke ahụ. Ashley Barnes nwa Flynn bụ nnukwu onye Man City na-akwado.
Onye ọkpụkpọ Burnley Ashley Barnes kwuru na e kwere ya nkwa agbamume site na ya Jurgen Klopp site na SMS ka o tiri ndi Manchester City ihe site na ha napucha olile anya ha.
Ị maara?… Obi adịghị Flynn ụtọ mgbe ọ nụrụ ya. O wee sị m, 'Bịa nna m, adịla njọ !!.' Agwara m ya… 'Nwa m, ewela ọrụ m.'
Obi dị m ụtọ na Barnes emeghị ihe ọ bụla na-atọpụ aha kachasị elu na isi Liverpool. Ọ bụrụ na o mere, ọ gara inwe otu nwatakịrị nwoke na-enweghị obi ụtọ nke na-eche ka ọ laghachite n'ụlọ maka iwe.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - LifeStyle
Maka onye kwaara ụgbọ ala Smart ọzụzụ n'otu ụbọchị, ma kwalite nke ahụ na obere ntakịrị, ọ dị mfe iche n'echiche na Barnes na-ebi ndụ dị mfe. In ụwa nke bọọlụ ọgbara ọhụrụ nke ụgbọ ala na mkpokọta mmadụ na ntanetị, Barnes dị ka Ngolo Kante bụ ọgwụ na-enye ume ọhụrụ.
Ashley Barnes LifeStyle Eziokwu. Ebe E Si Nweta nye AutoEvolution. Ebe E Si Nweta Ka Nnweta Evolushọn na Gburugburu
Dị ka ọ dị na March 2018, onye na - eme ihe a nwetara ụgwọ ọrụ nke onye ọrụ 2.4 Nde Euro (2.0 Nde Pound) kwa afọ. Runkpagbu nke ahụ na ịkpata ego kwa oge, ọ pụtara na Ashley Barnes na-akpata £ 5,632 kwa ụbọchị yana £ 235 kwa elekere, £ 3.91 kwa nkeji na £ 0.07 kwa sekọnd. N'agbanyeghị inweta nnukwu ego a, Barnes ji okpukpe kpọrọ ihe maka ijikwa ego ya.
Ashley Barnes Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Banyere Ihe Na-adịghị Eke Ndụ Ndị E Bipụtara - Eziokwu efu
AKWOOKKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW KKWỌ N'ISB THETA Ihe omume a mere na 13th nke Eprel, 2019. Ọ bụ ụbọchị Ashley Barnes nwetara akwụkwọ ihe ndị egwuregwu bọọlụ na-akpọ ya “Nke kachasị njọ nke ọnọdụ“. Lee ihe o mere n'okpuru.
Ashley Barnes Untold Facts- Akwukwo ndi ozo. Ebe E Si Nweta to SportsBible. Ebe e si nweta ya Egwuregwu
Ị maara?… He bụ onye ọkpụkpọ gbaa akwụkwọ maka ịmakụ onye agbachitere aha ya bụ Joe Bennett n'oge egwuregwu na Cardiff City. Ha abụọ bụ ndị egwuregwu nwere esemokwu na nkeji oge ọkara nke mbụ nke butere ọgụ. Kama iweli isi ya elu na Bennett, Barnes kpebiri igosipụta mmetụta ya site na ịmakụ ya.
IPdebanye aha: Na 9 March 2013, Barnes natara kaadị uhie na oge nkwụsị megide Bolton n'ihe a na-ewere dị ka ọgụ dị egwu. O nwetere ihe ịga nke ọma n'egwuregwu bọọlụ ahụ.
Ashley Barnes butere akwụkwọ maka ịgbanye onye Referee. Ebe e si nweta DailyMail
Nke a bụ ihe dị njọ dị ka ndị England FA nke nyere ya iwu mmachi asaa. Ruo obi ụtọ nke ndị fan ya, Barnes si na mmachibido iwu ahụ pụta na 20 Epril na-enwetara ihe mgbaru ọsọ abụọ na mmeri 6 – 1 na Blackpool. Akpọrọ ya onye egwuregwu.
EGO NA-EKP HETA N'AKA EGO: Ọ dịghị onye ọzọ karịa Virgil van Dijk, naanị nke Otu onye na-agbachitere o kwuru na-amaghị ụzọ aghụghọ ya niile.
Ashley Barnes na-ahụ Virgil van Dijk dị ka onye na-agbachitere Toughest o nwetụrụla. Ebe e si nweta BurnleyExpress
N'okwu ya: “Virgil van Dijk bụ onye kachasị sie ike na mbụ m busoro ọrụ m. Ọ bụ naanị m na-enwetabeghị ihu karịa ma. Iszọ nke dị ike ma dị ike. Virgil bụ igwe, ”Ka Barnes kwuru.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Ashley Barnes Akụkọ nwata na mgbakwunye Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ akụkọ Burnley
Mason Holgate Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Tariq Lamptey Akụkọ nwata
Phil Foden Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Daniel Sturridge nwa akụkọ akụkọ nke na-emeghe akụkọ ihe omuma
Jack Grealish Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Ahụike Untold
Mason Mount Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Jermain Defoe nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu